६५ देशको प्रतिनिधि फेर्ने कुरा सम्भव छैन : अध्यक्ष कुमार पन्त - Diaspora Nepal Diaspora Nepal
६५ देशको प्रतिनिधि फेर्ने कुरा सम्भव छैन : अध्यक्ष कुमार पन्त
एनआरएनएको निर्वाचनका कहिले हुन्छ ? निर्वाचन गराउन तीन वटै अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु सँग कसरी छलफल भैरहेको छ । यस्तै समासामयिक बिषयमा एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त सँग गरिएको
सम्पूर्ण विवादको निकास अधिवेशन र निर्वाचन नै हो। केही साथीहरूको असन्तुष्टि छ।
यसलाई थाती राखेर पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन र निर्वाचन रोकिएको रोकियै भयो, मूल जड के हो ?
अहिले विद्युतीय मतदान गर्ने भनिएको छ। यसमा सबैले विश्वास गर्लान् ?
राज्यले पठाएर त्यो देशका लागि लड्ने गरे पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यूके, हङकङ र सिंगापुरलगायतमा उनीहरूले ज्यानको बाजी लगाउनु परेको छ। तर सेवासुविधा पाइरहेका छैनन्। मानव अधिकारको हनन् भइरहेको छ। हामी र गोर्खालीले मात्रै आवाज उठाएर नहुने भएकाले सरकारले नै आवाज उठाउनुपर्छ। देश गरिब हुँदैमा स्वर सानो हुनुपर्छ भन्ने छैन। अधिकार सबैको बराबरी हो। हामीले ब्रिटिस सरकारलाई झक्झकाउने, अनशन बस्नेलगायतले आंशिक सफलता प्राप्त गरेका छौं। अझै पूरै गोर्खाजलाई सुरक्षित राख्न, त्यहाँका नागरिकसरह सुविधा पाउन राज्य नै बलियो ढंगले उपस्थित हुनुपर्छ। साभार : अखण्ड भण्डारी / तुलसी सुवेदी (अन्नपूर्ण पोस्ट्)